गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु - Gaunbeshi
Posted on २२ पुष २०७७, बुधबार १०:१९ Author Gaunbeshi Comment(0)
पोखरा, पुस २२ । गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले कोभिड–१९ को उपचार, नियन्त्रण, व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारीलगायत विषयमा सरकारको जवाफ माग्दै विशेष अधिवेशन बोलाउन गत मंसिर ३० मा प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग गरेका थिए ।
अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा, जसपाका हरिशरण आचायले कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारमा एक भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारको स्रोतसाधन अनुसार नै कोभिड १९ नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गरे । उनले कुन भ्याक्सिन आउँछ, त्यस आधारमा ल्याब बनाउनुपर्ने हुँदा हाललाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको हाताभित्र ल्याब बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भ्याक्सिन राख्न चाहिने बजेट पनि दिने आश्वासन संघीय सरकारबाट आइसकेको बताए ।
उनले गण्डकी प्रदेश बेरुजू रकम धेरै हुनेमा दोस्रो प्रदेश रहेकोमा आगामी दिनमा बेरुजू फछ्र्यौट बढी गर्ने प्रदेशको रुपमा अघि बढ्ने बताए । ‘संघीयता जादुको छडी थिएन र होइन । अरु व्यवस्थाको तुलनामा यो व्यवस्था बढी संयोजनकारी, बढी विकल्प दिन्छ कि भनी संघीयता छनौट गरिएको हो । भर्खरै जन्मिएको संघीयताले अहिले नै बोलेन, दौडेन कि भनेर भन्नु हतारो हुन्छ कि रु’ उनले भने, ‘अरु मुलुकको कार्यान्वयनको गति हेर्दा हाम्रो गति कम हैन । हामीलाई छिटो र चाँडो चाहिएको छ, त्यसैले असन्तुष्टि पाइएको हो ।’राजधानी दैनिकबाट
डा. केसीका प्रतिनिधी र सरकारी टोलीबीचको वार्ता स्थगित, चारबजेपछि फेरि बस्ने
Posted on २२ आश्विन २०७७, बिहीबार १५:४५ Author Gaunbeshi
सरकारी टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता केही समयका लागि स्थगित भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आज (बिहीबार) बिहान साढे दश बजेदेखि जारी वार्ता दिउँसो ४ बजे फेरि बस्ने गरी स्थागित भएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले जानकारी दिए । उनले बिहानदेखि भएको वार्तामा सरकारी टोलीसँग डा. केसीका मागहरूको […]
काठमाडौंमै एक महिलालाई खम्बामा बाँ धे र सिस्नु पानी लगाइयो, कारण थाहा पाए पर्नु हुनेछ अचम्ममा
Posted on २९ पुष २०७७, बुधबार ११:३७ Author Gaunbeshi
शहरमा चेतनाको स्तर माथि रहेको मानिन्छ । तर, काठमाण्डौं उपत्यकामा भएको एक घटनाले यो कुरा गलत सावित गरेको छ । यहाँ दिउसै महिलामाथि अपमान जनक ब्यवहार गरिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामै एक महिलालाई खम्बामा बाँ धे र सिस्नु पानी लगाइएको छ । उनीमाथि यस्तो कार्य गर्ने पनि महिला नै छन् । उनीमाथि लगाइएको आरोप पनि […]
Posted on ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १३:४४ Author Gaunbeshi
गोरखा : गोरखा दरबारस्थित दशैँघरबाट काठमाडौँको हनुमानढोका दरबारका लागि फूलपातीसहितको डोली पठाइएको छ । विधिपूर्वक पूजाअर्चना गरी दरबारका सुसारेले शुक्रबार बिहान ९ :१० बजेको शुभसाइतमा फूलपातीसहितको डोली काठमाडौं पठाएका हुन् । फूलपातीको डोली बा २ झ ३२२१ नम्बरको सरकारी गाडीमा राखेर हनुमान ढोका दरबार पठाइएको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरिप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । […]
आमाको २० दिन अघि नै निधन भएको थियो, १३ र ९ वर्षको बच्चालाई फकाएर आमाको आत्मा फिर्ता ल्याउन भन्दै पुजा गर्दैथिए पुजारी
खोटाङमा ट्याक्सी दुर्घट्ना हुँदा तीन जनाको ज्यान गयो, ६ घाइते
Posted on ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ११:०७ Author Gaunbeshi
Posted on २५ भाद्र २०७६, बुधबार ०९:१४ Author Gaunbeshi
बैतडीमा कुटपीटबाट एकजनाको मृ*त्यु
Posted on ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार १६:१३ Author Gaunbeshi
हत्या गरिएका प्रहरी जवानको अछाममा अन्त्येष्टि
Posted on ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १६:२४ Author Gaunbeshi
Posted on २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०८:२१ Author Gaunbeshi
Posted on २ कार्तिक २०७७, आईतवार १३:३२ Author Gaunbeshi